Home » သတင္းေၾကျငာခ်က္ » တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်ရေနွေးငွေ့ခန်း
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အထဲကအလုပ်လုပ်မထိုက်မတန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာတည်းခို၏အရေးကြီးသောကဏ္ဍများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ပုံမှန်နှင့်တိကျခိုင်မာစွာလေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်အနာပေါက်ထွက်ခွာအဖြစ်, ပင်ပန်းတယ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ဘက်စုံ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့ပင်ထပ်တူထပ်မျှအရေးကြီးနိုင်ပါတယ်, ဆိုလိုသည်; အလို့ငှာ အမြင့်ဆုံး သင်၏အရေးပေါ်များ၏ထိရောက်မှု, action ကိုဖြောင့်ကိုယူသှားရန်လိုအပ်ပါသည်။ နေတုန်း, သင်သည်ဤကိစ်စတှငျလုပျနိုငျအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာရှိပါတယ်, ဖြည့်စွက်သုံးပြီးနှိပ်နယ်, လက်ျာအစားအစာများစားသုံးခြင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်သွားကြသည် အာရုံစူးစိုက် Post-ယလေ့ကျင့်ခန်းရေနွေးငွေ့အခန်းတစ်ခန်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများပေါ်မှာ။
ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်တစ်ရေနွေးငွေ့အခန်း၏အသုံးပြုမှုကိုသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေအတွက်တင်းမာမှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေ; ဒီတွဲပြီးပြုလုပ်ကိုလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ ရေနွေးငွေ့ခန်း၌ဖြစ်ခြင်း (ကယျြဝနျး) သင့်သွေးကြော dilate စေသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုးပွါးလာ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းတိုးတက်လာသောသွေးစီးဆင်းမှုအတွက်သင့်ရဲ့သွေးကြောရလဒ်များ Dilation ။ ဒီအလှည့်အတွက်, ကြွက်သားကြွက်သားပြုပြင်အတွက်အကူအညီပေးနေတာ, အောက်စီဂျင်နှင့်အာဟာရပိုမိုပေါများထောက်ပံ့ရေးများကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအစအပြင်းအထန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြွက်သားကနေစွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်များပိုမြန်ဖယ်ရှားရေးအဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုဆဲလ်တွေအတွက်အထောက်အကူ။ ဤရွေ့ကားသွေးဖြူဆဲလ်သည်အခြား irreparable ဆဲလ် (နှင့်သူတို့၏စွန့်ပစ်) ဆင်းချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့်လက်ရှိလျှင်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
နာကျင်ခြင်းဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းတိုးတက်အောင်အပြင်, ရေနွေးငွေ့အခန်းတစ်ခန်းကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်တိုးပွားစေပါသည်။ တနည်းကား, ဒီသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်၏မွေးမြူရေးတစ်ခုကသဘာဝအတိအကျဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများပြီးစီးအပေါ်သို့, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းသည်လာမည့်နာရီအနည်းငယ်များအတွက်ကြီးထွားနေသည်။ ဒါကပိုမြန်တဲ့ကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်၌သင်တို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းထက်တစ်ဖွဲ့လုံးအပေါ်ကိုသင်စွမ်းအင် (ကယ်လိုရီ) ကိုမီးမရှို့, ဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးက Post-ယလေ့ကျင့်ခန်းရေနွေးငွေ့အခန်းထဲမှာ session ကိုသင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်သည်ဤမြင့်အခြေအနေဖြစ်နေဆဲထိုကာလ၏အရှည်ချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ ဤ အကျယ်ချဲ့ သင့်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တိုးတက်မှု၏ထိရောက်မှုနှင့်သင့်လေ့ကျင့်ခန်း၏ရည်မှန်းချက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ပါလျှင်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။
နှစ်စဉ်ဒီအချိန်မှာအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုထဲမှာတငျပွသူသငျသညျမြား, အဘို့, ရေနွေးငွေ့အခန်းတစ်ခန်းကိုသုံးပြီးသင်စဉ်းစားမစေခြင်းငှါအချို့အကြိုးခံစားခှငျ့ရှိစေခြင်းငှါ။ ရေနွေးငွေ့ခန်း, ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ချောင်းဆိုးခြင်းမှသက်သာရာရစေရန် (အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီအတွင်း) ၏ကြားဖူးမဟုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များကကူညီပေးပါတယ်။ လည်ချောင်းယားယံ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး '' ကိုမီးရှို့ '' အာရုံကိုလည်းတစ်ဦးအတော်လေးဘုံဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်သည်ဤလေအအေးဖြစ်ခြင်း၏ရလဒ်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါဟာအမှန်တကယ်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့၏ဆင်းရဲသားအဆင့်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လည်းရေနွေးငွေ့အခန်းတစ်ခန်းကိုသုံးပြီးဒီမလိုလားအပ်သောနှင့်မသက်မသာ, ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ကူညီပေးသည်။ ဤသည်ကိုဆင်းရေနွေးငွေ့ခန်း၏လေထုထဲတွင်အစိုဓာတ်၏အဆင့်များနှင့်လည်ချောင်းထဲမှာသွေ့ခြောက်ခြောက်အသားအရေ၏ရရှိလာတဲ့ rehydration ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား deleterious လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘဲဖြစ်လိမ့်မည် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူသငျသညျမြားမှအကျွမ်းတဝင်တစ်ဦးရေနွေးငွေ့အခန်း၏အဓိပ္ပာယ် Post-လေ့ကျင့်ခန်းအသုံးပြုမှုကိုအလွန်အမင်းအကြံပြုသည်။
ရေနွေးငွေ့ခန်း '' အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်မွှမ်းတင်အကျိုးအတွက်သူတို့သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ detoxification လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကူညီရန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယခုဤစကားမှန်သည်နေတုန်း, ရေနွေးငွေ့အခန်းတစ်ခန်းကို အသုံးပြု. လက်ရှိအားလုံးအဆိပ်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့သွားမပေးပါ။ တစ်ဦးကရေနွေးငွေ့ကအခန်း (သဲလွန်စ element တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ကူညီပေးပါမည်နည်းသော သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေအဆိပ်၏) 1% ထက်။ သို့သော်ရေနွေးငွေ့အခန်းထဲမှာ session ကိုသိသိသာသာအရေပြား၏ detoxification အတွက်ကူညီမည်နှင့်အညစ်အကြေးများကြောင့်ကင်းစင်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းချွေးချအအေး၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်စဉ်အတွင်းချွေး, အဆိပ်ဓာတ်သူ့ဟာသူ purging အဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအနည်းလမ်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏ ကဲ့သို့သောအဆိပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအတင်းအဓမ္မနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သူကခန်းခြောက်အဖြစ်အရေပြားပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြလော့။ ရေနွေးငွေ့အခန်း၏အပူနှင့်စိုထိုင်းဆကိုထိရောက်စွာသင့်ရဲ့အသားအရေများ၏သန့်စင်ပြီးပါက, ချွေးအခြောက်မှခွင့်မပြုပါဘူး။ ဤသည်ကိုလည်းအရေပြား၏ rehydration အတွက်ရလဒ်များ, နှင့်သင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုအရေပြားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ameliorate ဖို့ကူညီနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရေနွေးငွေ့ခန်း၏အသုံးပြုမှုကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်၏မွေးမြူရေးမှတဆင့် hyperthermia ဖြစ်ပေါ်သည်။ hyperthermia မဆိုနိုင်ငံခြားအလောင်းတွေကိုချွတ်သတ်ဖြတ်သို့မဟုတ်တစ်ခုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် သက်ရှိကြောင်း သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မည်အကြောင်း, သူတို့ကဤကြီးထွားအပူချိန်မှာရှင်သန်နိုင်ဘူးအဖြစ်။ သင်တစ်ဦးသည်ဖျားနာတဲ့အခါဥပမာ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်နိုင်ရန်အတွက်၎င်း၏အပူချိန်တိုးပွါးလာ။ ကျနော်တို့ပြီးသားကိုခန္ဓာကိုယ်ပြီးသားတတ်နိုင်သမျှကျန်းမာဖြစ် '' တိုက်ပွဲ '' ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကဖြစ်ပေါ်သည့် autoimmune တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ထိမိပါပြီ။ ဒီတော့ထွက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ရေနွေးငွေ့အခန်းတစ်ခန်းကို အသုံးပြု. ကအားလုံးကိုနိုင်ငံခြားအလောင်းကောင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖယ်ရှားပစ်မထားဘူးသော်လည်း, နေမကောင်းကျသွားသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
ဒီ post ကနေဆမ် Socorro ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ကာမဂုဏ် Spa မ်ား. ဆမ်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနယ်ပယ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူစာရေးဆရာဖြစ်ပြီး 10 နှစ်အတွင်းအဘို့ဤတစျခုနဲ့တူအကြောင်းအရာများရေးသားခြင်းများနှင့်လေ့လာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2017 FitnessRebates သတင္းေၾကျငာခ်က္ မှတ်ချက်မရှိ
479 /2/5သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိသည့် Bowflex X14SE မူလစာမျက်နှာအားကစားရုံအပေါ် $ 17 ကျော် Save